आज १४ गते मुख्य समाचार – मनिषा कोइराला सहयोग, फैलियो बर्ड फ्लु , किराना पसल बन्द, बैक कर्जा – Classic Khabar
May 28, 2021 356
मुलुकभर ६ हजार ९३९ जना नयाँ कोरोना संक्रमित थपिए, १०६ को मृत्यु । ३८ हजार प्रहरीले लगाए कोरोना विरुद्धको खोप । कोरोनाविरुद्ध लड्न अर्थ मन्त्रालयले ४१ अस्पताललाई दियो एक अर्ब ४१ करोड । दोश्रो पटक कोरोना संक्रमणमुक्त भएपछि प्रमोद भन्छन्–‘५ दिनसम्म निकै । डर लागेको थियो । किराना तथा खाद्यान्य पसल वन्द गर्दा उपभोक्तालाई मर्का पर्छः नेपाल चेम्वर ।
सन्दीप क्यारेबियन प्रिमियर लिगमा सीपीएलबाट खेल्ने । शैक्षिक गतिविधि बन्द नहुने गरी वैकल्पिक विधिहरु अपनाउन । त्रिविको क्याम्पसहरुलाई आग्रह । सेयर बजारमा नयाँ रेकर्ड, एकै दिन साढे १४ अर्ब माथिको कारोबार । अन्तराष्ट्रिय उडान कहिले हुन्छ ? सरकारले दियो यस्तो जानकारी । कांग्रेस प्रवक्ता शर्माको प्रश्न : आदर्श मिश्राको आँशुको सुनुवाइ राज्यले सुन्ने कि ।
फिफा वरीयतामा नेपाल १७१औं स्थानमा यथावत । किराना पसल बन्द हुँदा खाद्य र साल्ट ट्रेडिङले होम डेलिभरी गर्ने । क्यालिफोर्नियामा एक जनाले अन्धाधुन्ध गोल चलाउँदा ९ जनाको ज्यान गयो । ५३ लाख ८० हजार नगदसहित हुण्डी कारोबारमा संलग्न दुई जना पक्राउ । काठमाडौँका तीन स्थानमा फेरि बर्डफ्लु सङ्क्रमण ।
सुनको मुल्य ताेलामा ७ सय रुपैयाँले बढ्यो । कारभित्र मृत भेटिएका बालकका परिवारलाई क्षतिपूर्ति दिने सहमति । महामारीमा पनि बैंकहरूले घटाए निष्क्रिय कर्जा, कुन बैंकको कति ? पौडेललाई देउवाको जवाफ- महाधिवेशन नगरेर मलाई कलंकको टीका लगाउनु छैन । यो वर्ष पनि सलहका झुण्ड नेपाल आउन सक्छन् ।
Prevतपाइलाई आज बाट खाद्यान्न चाहिए यी नम्बरमा फोन गर्नुस्
Nextआज यि स्थानमा हुनेछ अति भारी वर्षा र उच्च बेगको हावाहुरी , सतर्क रहन मौसम बिभागको २४ घण्टे चेतावनी